‘डिट्ठा साब’ले कस्तो उडाउँलान् ‘चङ्गा’ ? « Ramailo छ
‘डिट्ठा साब’ले कस्तो उडाउँलान् ‘चङ्गा’ ?
प्रकाशित मिति : Jan 18, 2018
समय : 11:48 am
डिट्ठा साबको नामले चिनिने हाँस्य कलाकार किशोर भण्डारीले ‘चङ्गा’ फिल्म निर्देशन गर्ने भएका छन् । बुधबार मण्डला नाटक घरमा प्रेसमिट गर्दै फिल्म निर्माणको औपचारिक घोषणा गरिएको हो । फिल्ममा रिश्मा तिमल्सिना निर्मात्रीको रुपमा रहेकी छन् ।
पूर्ण रुपमा मनोरञ्नात्मक फिल्म गरिएको ‘चङ्गा’ मा कलाकारहरु बुद्धि तामांग, राजन खतिवडा, कमलमणी नेपाल, अंकित खड्का, लक्ष्मी वर्देवा, राजन खतिवडा, जीवन भट्टराई लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेनछ ।
फिल्मको कथा निर्देशक भण्डारी आफैंले लेखेका हुन् । रविन आचार्यले खिच्ने फिल्ममा राजनराज सिवाकोटी र कमल खत्रीको संगीत रहनेछ । यही महिनामादेखि छायाँकन सुरु हुने फिल्मलाई आउँदो सालको जेठ ११ गते प्रदर्शनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।